प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गणतन्त्र दिवसका अवसरमा दिएको शुभकामना सन्देशको पूर्णपाठ « रिपोर्टर्स नेपाल
गणतन्त्र शासन प्रणाली मात्रै होइन। यो त नयाँ सभ्यता, संस्कृति र सामाजिक जीवन पद्धति पनि हो। गणतन्त्र सामाजिक न्याय र समानतामा आधारित समृद्धि सहितको प्रणाली हो, त्यसैले यहाँ महिला, दलित, पछाडि परेका कुनै पनि समुदायमाथिका कुनै पनि विभेदहरू ग्राह्य र सह्य हुन सक्दैनन्।
गणतन्त्रमा जाति, वर्ण, धर्म वा अरु कुनै पनि आधारमा कसैमाथि पनि असमानता, भेदभाव र छुवाछुतको व्यवहार स्वीकार्य हुन सक्दैन। गणतन्त्र उन्नत लोकतान्त्रिक संस्कार भएको शासन प्रणाली हो। यहाँ विचारहरुबीच स्वस्थ बहस, मान्यताहरुबीच मर्यादित छलफल र असहमतिहरुको निर्वाध अभिव्यक्तिको प्रत्याभूति हुन्छ। तर घृणा, विद्वेष र विभाजन ग्राह्य हुन सक्दैन। गणतन्त्र विगतका अन्य कुनै पनि प्रणालीभन्दा शासन व्यवस्थाका हिसाबले मात्रै नभएर आचरण र व्यवहारले पनि उन्नत र परिस्कृत प्रणाली हो र हुनु पर्दछ। गणतन्त्रमा आफ्ना विचारहरु निर्वाध ढङ्गले अभिव्यक्त गर्न पाउने स्वतन्त्रता हुन्छ, तर आफ्ना विचार या स्वार्थका लागि हिंसा र आतङ्क तथा डर र त्रासको प्रयोग स्वीकार्य हुन सक्दैन। अधिकार र कत्र्तव्यको न्यायोचित सन्तुलनले नै गणतन्त्रलाई सफल र सार्थक तुल्याउँछ। सरकारको प्रयास गणतन्त्रलाई हरेक हिसाबले परिपूर्ण बनाउने कुरामा केन्द्रित छ।
प्रधानमन्त्री ओलीले के निर्णय लिदैछन् ?
काठमाडौं, २० असार । यसै हप्ता विहान र दिउँसो एकै दिन दुईपटक शितवनिवास पसेका प्रधानमन्त्री
बामदेव फेरि ओली क्याम्पमा, बादलको साथ !
काठमाडौं, २० असार । सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) भित्र चुलिएको विवाद समाधानको लागि
राष्ट्रपति भेट्न प्रधानमन्त्री ओली शितलनिवासमा, मन्त्रीहरुलाई बोलाए बालुवाटार
काठमाडौं, २० असार । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई भेट्न शितलनिवास पुगेका छन्